PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - USIHLALO WE-PSL UKHUZA "IVOSHO" ENTSHENI YAKULELI
USIHLALO WE-PSL UKHUZA "IVOSHO" ENTSHENI YAKULELI
Ilanga langeSonto - 2018-09-09 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
USIHLALO wepremier Soccer League (PSL) u-irvin “Iron Duke” Khoza ukhuza ivosho entsheni akholwa wukuthi kwayona inomthelela omubi odala ukuthi intsha yakuleli igcine izihlanganisa nezinto ezingalungile.
IPSL yethule isouth African Police Services (SAPS) njengophathina bayo abasha emcimbini obungolwesine emini egauteng.
Kulo mcimbi bekukhona izikhulu zamaphoyisa ezihlonishwayo nongqongqoshe wawo amaphoyisa imbala, ubheki Cele. Engxoxweni ekhethekile ukhoza abe nayo naleli phephandaba, uthe isizathu esimenze wazimatanisa namaphoyisa wukuthi ufuna ukusebenzisa ibhola ukulwa nokungaziphathi kahle kwentsha yakuleli.
“Ibhola linamandla ngendlela eyisimanga, likwazi ukuhlanganisa abantu bekade bengazwani bagcine sebeyinto eyedwa.
"Into eyenze sazihlanganisa NESAPS wukuthi nathi sifuna ukusebenzisa ibhola ukufaka isandla entsheni yakithi, egxile kakhulu ezidakamizweni, ubugebengu nokunye okungekuhle.
"Iningizimu Afrika ibhekene nesimo esinzima kwezomnotho. Intsha yethu kayiqondi ukuthi kwenzakalani, yingakho sifuna ukusebenzisa leli thuba ukufaka isandla.
"Intsha yethu ibulawa yile vosho, kuduma yona emakhanda. Kufanele siyilwe le nto ukuze ihlukane nala mavosho,” kusho ukhoza.
Uqhube ngokuthi ngokubambisana NESAPS bazohambela izifundazwe ezahlukene bashumayele ivangeli lokuziphatha kahle entsheni besebenzisa unobhutshuzwayo. “Ngale nto esiyenzayo sizama ukuzisiza thina ngoba sizogcina singabatholi abadlali ngenxa yokugxila kwentsha ezidakamizweni.
"Sizohambela zonke izifundazwe ukucija intsha yethu ngoba le nto yokuwa komnotho isithinta sonke. "Sikhathazekile ngale nto ngoba sinonembeza,” kusho ukhoza.